Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 8)
Cod WhatsApp ah oo qoraal ah, ama sida loo aqriyo codadka nagu soo dhaca WhatsApp
Android Oreo waxaa kaliya laga helaa 12% qalabka
Kala-jajabnaanta ku jirta Android waxay joojisay soo jiidashada dareenkeena, ficil ahaan, noocyadii ugu horreeyay ee nidaamka hawlgalka moobiilka ee Google. Qeybta Suuqa ee nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee Android, Android Oreo, waa kaliya 12%, ku dhowaad sanad kadib markii la bilaabay.
Kaaliyaha Google hadda wuxuu oggol yahay wicitaanno fiidiyoow ah
Hadda waa suurtagal in wicitaanno fiidiyoow ah lala sameeyo Kaaliyaha Google. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee ku yimid Kaaliyaha Google.
Muuqaal qurux badan oo aan lahayn xidid app !!
Sida loogu beddelo ogeysiisyada mobilada xusuusin leh PushMe
PushMe waa barnaamij bilaash ah oo ku siinaya awood aad ugu rogi karto guddiga ogeysiiska meel loogu talagalay xusuusinta shaqsiga ah.
Google Play wuxuu baddelayaa qaabeynta mashiinka raadinta
Google Play wuxuu u soo saaray naqshad cusub mashiinkeeda raadinta. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta cusub ee aan ka helno mashiinka raadinta dukaanka.
Galaxy Note 9 wuxuu yeelan doonaa batari 4.000 mAh ah
Batariga Samsung Galaxy Note 9 wuxuu noqon doonaa 4.000 mAh. Raadi wax badan oo ku saabsan batteriga uu dhamaadka-sare ee sumadda Kuuriya yeelan doono.
MIUI 10 ayaa maanta timid taleefannada cusub ee Xiaomi
Inbadan oo taleefannada Xiaomi ah ayaa cusbooneysiiya MIUI 10 maanta. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan moodooyinka hela casriyeynta lakabka u-habeynta.
Codsi layaab leh oo loogu talagalay Android !!
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee sameeya wicitaanada fiidiyowga
Shanta codsi ee ugu fiican Android si aad u sameyso wicitaano fiidiyoow ah. Soo ogow barnaamijyadan aad wicitaannada fiidiyowga ku sameyn karto.
Daanyeer, barnaamijka ku sheekaysiga fiidiyowga ee caanka ah ayaa kugu xaddidaya 15-labaad oo sheekeysi ah
Hadda waxaad fuuli kartaa geedo kala duwan Daanyeer si aad ula sheekaysato shisheeyaha 15 ilbidhiqsi mawduuc kasta oo gaar ah.
Sida loo abuuro GIFS iyadoon loo baahnayn barnaamijyo
Instagram waxay tijaabisaa falcelinta u eg Facebook ee Sheekooyinka
Instagram waxay ku tijaabineysaa sheekooyinka Instagram waxa falcelinta u eg Facebook ay tahay sidaa darteed waxaad ku muujin kartaa naftaada siyaabo kale.
Dukaanka App wuxuu leeyahay laba jeer dakhliga Google Play laakiin kala badh soo degsashada
Daraasad cusub ayaa soo daabacday in App Store uu leeyahay laba laab dakhliga soo gala Google Play xitaa marka uu haysto kalabar soo degsigiisa
Haddii aad seegto emojis-ka Android, waxaad horay ugu heli kartaa iyaga oo ku jira Android Gboard iyo Messages
Farriimaha Gboard iyo Android waxay noo oggolaanayaan inaan leenahay emojisyada Android ee loo yaqaan 'blobs' mar kale. Way lumeen tan iyo markii Allo la joojiyay.
Beta-kii ugu dambeeyay ee WhatsApp wuxuu muujinayaa horudhaca waraaqaha
WhatsApp waxay dhawaan yeelan doontaa istiikarada, beta-kan xiga wuxuu muujinayaa horudhac iyo xoogaa xog dheeri ah
Microsoft Edge ayaa lagu cusbooneysiin doonaa tarjumaadda bogga. La soco wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ku soo socota biraawsarka goor dhow.
Barnaamijyada eReader ee ugu wanaagsan Android
Shanta barnaamij ee ugu wanaagsan eReader ee loogu talagalay Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan si aad ugu akhrido eBooks-ka ku jira Android.
Barnaamijyada ugufiican ee TV-ga Android
Shanta codsi ee ugufiican ee TV-ga Android, Baro xulashada barnaamijyadan aan hadda ku soo dejisan karno Android TV.
XBrowser, ama biraawsar kale oo lagu beddelo Chrome iyo Firefox oo leh 1MB rakibid
1MB ayaa culeyskiisu yahay XBrowser, oo ah biraawsar web ah oo doonaya inuu noqdo bedelka ku habboon kuwa caanka ah sida Firefox ama Chrome.
[Fiidiyow] Duel ee daalacayaasha shabakadda, waxaan raadineynaa sida ugu dhaqsaha badan
Xusuus-qorrada Firefox: Tilmaamaha rakibidda tallaabo-tallaabo iyo sida loogu isticmaalo kombuyuutarka iyo Android
Casharro wax ku ool ah oo aan ku tusayo sida loo rakibo arjiga cusub ee 'Firefox Notes' ee labada Android iyo PC iyo sidoo kale tilmaamaha wax ku oolka ah ee loo adeegsado.
Android Auto horeyba wuxuu noo ogolaadaa inaan helno ajandaha dhameystiran ee taleefankeena casriga ah
Cusbooneysiinta soo socota ee Android Auto ayaa ugu dambeyntii noo oggolaan doonta inaan helno liistada taleefannada gacanta oo dhameystiran oo aan ku keydinnay taleefannadeenna casriga ah.
Instagram waxay hadda sameysay imaatinka su'aalaha ee Sheekooyinka Instagram rasmi ah. Waad ku samayn kartaa iyaga oo ku dhejiya warqadda su'aasha ah.
Sida looga hortago Android inay dilaan barnaamijyadooda asalka ah
Laga soo bilaabo Waze beta waxaad u isticmaali kartaa halkii Khariidadaha Google ee ku yaal Android Auto, si aad uga faa'iideysato qaar ka mid ah xogta gaarka ah tan koowaad.
Sida loo beddelo liiska saamiyada ee Android
Ka sameyso naqshado iyo naqshado cajiib ah taleefankaaga gacanta Canva
Canva waxaad lahaan doontaa ikhtiyaarka aad ku abuureyso sawirro muuqaal ah oo aad ku qaabeyn karto kaararka, bogagga Facebook ama soo koobitaannada.
Soo hel xiddigaha iyo xiddigaha leh SkyView: raac meeraha Mars Luulyo
Bisha Luulyo waa muhiim maxaa yeelay Mars waxay mari doontaa meel aad ugu dhow meeraheenna. SkyView ayaa kaa caawin doonta inaad raacdo oo aad u aragto dhalaalkeeda saddex laab.
Beddelka tayada leh ee Google Play Store
Barnaamijyada Naqshadeynta Maaddooyinka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Shanta barnaamij ee ugu fiican ee Naqshadeynta Qalabka ee loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan adeegsanaya qaabkan.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee lacag lagu diro
Shanta codsi ee ugu wanaagsan ee Android lagu diro lacagta. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan kuu oggolaanaya inaad lacag ugu dirto asxaabtaada.
Khadadka muhiimka u ah Telegram-kaaga
Musitude waa hab kacaan oo lagu barto heeso fara badan
Musitude waa barnaamij cusub oo kumbuyuutarka moobiilka u beddelaya qalab muusiko ah oo lagu barto heeso badan.
Sida loogu qasbo wareegga shaashadda xitaa barnaamijyada aan la taageerin
Vivo Z10, aaladda cusub ee shirkadda ayaa wali ku jirta Android Nougat
Maalintii shalay ahayd, Vivo waxay noo soo bandhigtay Vivo Z1i, oo ah meel dhexe oo horey u ahayd qeyb ka mid ah liistada shirkadda Shiinaha ee la socota Qualcomm Snapdragon 636 SoC Meet the Vivo Z10 cusub, oo ah meel dhexe oo leh qayb sawiro cajiib ah taas oo aan ka heli karno sawirro tayo xirfadeed leh kamaraddeeda.
Bixinta Top GearBest - July 2018
Soo ogow dalabyada ugu wanaagsan ee laga heli karo Gearbest oo ha ku dhaafin badeecadahan qiimo dhimis weyn oo ku taal dukaanka caanka ah.
Navbar Weather waa barnaamij bilaash ah oo la yimaada ujeedada loo dejiyay bar socodka isla markaana ku ogeysiinaya cimilada.
Shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay joojisay taageerida saddex ka mid ah barnaamijyadeeda
Facebook ayaa ka saari doonta seddex barnaamij dhamaadka bisha. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan oo shabakadda bulshada ay ka tagi doonto.
Beta-ka seddexaad ee Android P, wuxuu noo ogolaanayaa inaan gacanta ku dhaqaajino qaabka mugdiga ama nalka iyada oo aan ku xirneyn darbiga aan ku rakibnay
Beta-kii saddexaad ee Android P ee loogu talagalay Google Pixel hadda waa la heli karaa
Beta-ka seddexaad ee Android P ayaa hada loo heli karaa dadka isticmaala ee qeyb ka ah barnaamijka beta ee haysta Google Pixel
Sida loo rakibo rasmiga rasmiga ah 'Spotify Lite' kahor imaatinkiisa Google Play
Telefoonada Nokia waxay cusbooneysiin doonaan Android P bisha Ogosto
Nokia ayaa taleefoonkeeda ku cusbooneysiin doonta Android P bisha Ogosto. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta ay taleefannada shirkaddu dhowaan heli doonaan.
Spotify Lite ayaa durba laga bilaabay Google Play Store
Spotify Lite ayaa hadda laga heli karaa Play Store. Ka raadi wax badan oo ku saabsan nooca qoraalka ah ee barnaamijka muusikada qulqulka caanka ah.
Barnaamijyada kirada baabuurta ee ugu wanaagsan Android
Shanta barnaamij ee kirada ugu fiican ee baabuurta loogu talagalay Android. Soo ogow barnaamijyadan si aad baabuur uga kiraysatid Android.
Playz wuxuu kaa hor dhigayaa webseries iyo waxyaabaha dhijitaalka ah ee ka socda RTVE qalabkaaga Android
RTVE waxay soo saartay barnaamij cusub oo loo yaqaan 'Playz' kaas oo siiya isticmaalaha waxyaabaha kujira qadka tooska ah ee bilaashka ah.
Barnaamijyada ugufiican Google Home
Shanta barnaamij ee ugufiican Google Home. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan aan u adeegsan karno si aan uga helno wax badan afhayeenka Google.
Sidee loo aamusiyaa dadka isticmaala wada sheekaysiga koox ee WhatsApp: maxaa ku cusub barnaamijka farriimaha
Waad dooran kartaa, haddii aad tahay maamule WhatsApp, inaad aamusiso dhammaan qolka kooxda wada hadalka si aad adigu farriimaha ugu dirto.
Noocyada "Lite" ugu wanaagsan ee barnaamijyada ugu caansan iyo shabakadaha bulshada
Dhammaan noocyada "Lite" ee liiskan waxaan ku haynaa midka cusub ee loogu talagalay 'Instagram', midka loogu talagalay Khariidadaha Google ama xitaa kan loogu talagalay Facebook.
Instagram Lite: Nooca loogu talagalay taleefannada gacanta ee leh xusuus hoose
Instagram Lite ayaa hadda laga heli karaa Play Store. Raadi wax badan oo ku saabsan nooca miisaanka fudud ee arjiga caanka ah ee culeyskiisu ka yar yahay 200 kb.
Ma ogtahay inta saacadood ee aad ku qaadato Netflix? Statflix ayaa kuu sheegi doona
Iyadoo la adeegsanayo 'StatFlix' waxaan gacanteenna ku haysan doonnaa suurtagalnimada inaan ogaanno inta saacadood ee aan maalin ku qaadanno Netflix oo ah kuwa taxanaha ah ee aan ugu jecel nahay.
IGTV waa barnaamijka Instagram ee lagu dhiso telefishanka wadajir
IGTV, oo leh malaayiin isticmaale oo uu leeyahay Instagram, wuxuu noqon karaa telefishanka qof walba oo aan wada dhisno.
Google Duo wuxuu joojin doonaa helitaanka wararka ku saabsan qalabka leh Android Jelly Bean
Codsiga wicitaanka fiidiyowga ee Google, Google Duo, ma heli doono cusbooneysiin ku saabsan boosteejooyinka ay maamusho Android Jelly Bean.
Iyadoo la adeegsanayo 'flokey' waxaad haysataa macallin "dhegeysta" si uu kuu baro sida loo ciyaaro biyaano
flowkey waxay bixisaa barnaamij loogu talagalay aaladaha mobilada ee kaa hor dhigaya macalin biyaano oo dhagaysan doona qoraalada si aad u barato heesaha.
Facebook ayaa ina tusi doonta waqtiga aan ku qaadanay arjiga
Facebook ayaa ku tusi doonta inta jeer ee aad ku bixiso barnaamijka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan shaqada dhowaan u imaan doonta shabakadda bulshada si loo maareeyo isticmaalka aad sameysid.
Sida loogu diro farriimaha isdilka geysta WhatsApp
Microsoft Edge wuxuu gaarayaa shan milyan oo soo degsasho ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan guusha biraawsarka ee Dukaanka Play-ka ee ay horeyba uga badnaayeen shan milyan.
Barnaamijyada ugufiican ee isbarbar dhiga qiimaha hoteelka iyo duulimaadka
Shan barnaamij oo Android ah si loo isbarbar dhigo qiimaha hoteelka iyo duulimaadka. Soo ogow barnaamijyadan Android ee aad ku qorsheyneyso nasashadaada.
Ku hees gabay ama koox Smule ah, barnaamijka aad codkaaga ku ogeysiinayso
Waxaa jira barnaamijyo yar oo u eg Smule, maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku heesato koox ama koox isla markaana sidaas ku muujiso codka qurxoon ee aad haysato.
Codadka nasashada ugu fiican ayaa barnaamijyadooda loogu talagalay Android
Shan barnaamijyo codad nasasho leh oo loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan codsiyada nasashada leh ee durba la heli karo
WhatsApp waxay ku soo bandhigi doontaa falcelinta istiikarada ku jira arjiga
WhatsApp waxay horeyba uga shaqeyneysaa jawaab celinta istiikarada. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan aaladda cusub ee ku imaan doonta arjiga farriinta ee durba bilaabay in la isticmaalo istiikarada
Google Play wuxuu soo bandhigayaa qayb lagu maamulo rukunka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qaybtaan cusub ee noo oggolaaneysa inaan aragno diiwaangelinta aan hayno
Ugu dambeyntii wuxuu yimaadaa in "shaqsi" intaa ka badan taabashada Kaaliyaha Google
Fikradda ayaa ah in "guriga" ee Kaaliyaha Google aad ka heli doontid dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay isla markaana aad isla markaasba ogaan doontid wax kasta oo maalintaas ku sugaya.
Codsiyada aadan ka heli karin Google Play Store oo aadan ku seegi karin Android-kaaga
Adobe Spark Post wuxuu ku yimaadaa Android beta, wuxuu abuuraa sawiro muuqaal ah
Adobe Spark Post waa barnaamij cusub oo Android ah oo kuu ogolaanaya inaad sameysid sawiro qurux badan oo aad ugu soo gudbiso warbaahinta bulshada.
Sida loo soo galiyo fiidiyoow toosan oo ah 1 saac barta Instagram: cibaaro weyn oo shabakadda bulshada ayaa halkan taal
Waa arrin daqiiqado ah inaad ikhtiyaar u leedahay inaad 1 saac oo fiidiyoow ah ku soo dhigto barta 'Instagram' ee laga helo taleefankaaga. Waxay la timid xaddidaadyo qaarkood inkastoo.
2 siyaabood oo loogu beddelo astaamaha ku yaal Android
TuLotero: Codsiga lagu ciyaaro bakhtiyaanasiibka meel kasta oo aad joogtid
TuLotero: Ku ciyaar bakhtiyaanasiibka meelkasta oo aad joogto. Soo ogow barnaamijkan iyo degelkan oo aad ku ciyaari karto bakhtiyaanasiibka wakhti kasta, meel kasta.
Google Podcasts hadda kumbuyuutar ahaan Android: hadda waxaa lagu heli karaa 2 milyan oo dhejis ah oo muujinaya
Google Podcasts-ka Android waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka hesho wax ka badan 2 milyan oo feylal dhejis ah oo laga soo qaatay barnaamij aad u taxaddar badan dhinaca muuqaalka.
Ereygu waa akhriste RSS ah oo aad u dhammaystiran oo casriyeysan qaabeynta
Haddii aad ka daashay Feedly ama gReader waqtigiisu dhacay, Eraygu waa akhriste RSS aad ugu fiican akhriskiisa tayada muuqaalka iyo waliba astaamaha.
Barnaamijyada xusuusin ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Barnaamijyada xusuusin ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android. Baro shantaan codsi xusuusinta dhammaan noocyada laga heli karo Play Store.
Barnaamijyada kafee ee ugu fiican Android
Shanta codsi ee ugu fiican ee qaxwada leh ee loogu talagalay Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan codsiyadan kafeega ah ee aan ka helnay Play Store.
Ha moogaanin Koobka Aduunka adigoo wata FMdB, oo ah keydka ugu weyn ee ciyaarta quruxda badan
Iyada oo leh FMdB waxaad gacanta ku heysaa keydka keydka kubbadda cagta ee ugu weyn adduunka. Barnaamij bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad ogaato dhammaan faahfaahinta qalabka.
Instagram way joojineysaa inay ku ogeysiiso markaad shaashad ka qaadatid sheeko
Instagram ma soo ogeysiin doonto marka qabashada lagu sameeyo sheekooyinka. Shabakada bulshada ayaa meesha ka saareysa mid ka mid ah shaqooyinkeeda muranka badan dhaliyay. Faahfaahin intaas ka badan.
Clue ma weydiisan kartid wax intaa ka badan, maadaama aan la jirno barnaamijka ugu fiican ee lagu xakameynayo wareegga caadada oo aan sidaas ku ogaanno qaabka gaarka ah.
WhatsApp waxay sii wadi doontaa inay bixiso taageerada gingerbread ee Android illaa 2020
Codsiga farriinta WhatsApp wuxuu ku dhawaaqay inuu sii wadi doono taageeridda dhammaan boosteejooyinka socda Gingerbread ilaa 2020.
Sidee si bilaash ah loogu daawan karaa dhamaan kulamada Koobka Aduunka 2018 ee Russia
Tarjumaadaha qad la'aanta Google Translate ee hadda lagu heli karo 59 luqadood
Google Translate wuxuu ku hagaajinayaa tarjumaadaha qad la'aanta 59 luqadood. Raadi wax badan oo ku saabsan hagaajinta ku timaadda adoo adeegsanaya sirdoonka farsamada.
Android waxay lahaan doontaa qaab mugdi ah cusbooneysiinta mustaqbalka. Habka habeenku wuxuu ugu dambeyntii gaari doonaa nidaamka hawlgalka iyada oo la cusbooneysiinayo.
Galaxy S7 iyo S7 Edge ee Spain ugu dambeyntii waxay helayaan cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo. Telefoonada Samsung ee bilaashka ah mar hore ayey cusbooneysiiyaan.
Instagram ayaa soo bandhigi doonta nooc u gaar ah YouTube-ka usbuuca soo socda
Instagram ayaa soo bandhigi doonta barnaamijkeeda fiidiyowga usbuuca soo socda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijkan doonaya inuu la tartamo YouTube.
Gmail for Android waxaa lagu cusbooneysiiyay dhaqdhaqaaqyo cusub
Gmail waxay ku cusbooneysiisaa barnaamijka Android tilmaam. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ku soo socota arjiga boostada.
Barnaamijyada ugu fiican ee biirka loogu talagalay Android
Shanta barnaamij ee ugu fiican Android ee ku saabsan biirka. Soo ogow barnaamijyadan biirka ah ee aad hadda ka soo dejisan karto Dukaanka Play-ka taleefankaaga.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee loogu talagalay kuwa jecel khamriga
Afarta barnaamij ee ugu fiican Android ee ku saabsan khamriga. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan kaa caawin doona inaad wax badan ka barato khamriga.
Yahoo Messenger ayaa si joogto ah u xirmi doonta 17-ka July
La xaqiijiyay: Yahoo Messenger wuxuu xirmayaa July 17. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka dalabka oo ku imaan doona wax ka yar daqiiqad.
[APK] Sida loo rakibo Kaameradda Google bilaa xidid
Casharro fiidiyow ah oo wax ku ool ah oo aan ku barayo sida loo soo dejiyo loona rakibo kamaradda Google iyada oo aan loo baahnayn xidid, kaliya soo degsashada gacanta iyo rakibidda codsi qaab apk ah.
Beta-kii labaad ee Android P horey ayuu u yimid: kuwani waa warkiisa
Android P Beta 2: Warka nooca cusub. Raadi wax badan oo ku saabsan waxa ku cusub nooca cusub ee nidaamka qalliinka.
Sida loo qaado sawirro muuqaal ah 3D sida 'Huawei P20 PRO' on Android kasta
Video-post oo aan ku sharraxayo sida loo qaado sawirro muuqaal ah oo 3D ah sida Huawei P20 PRO oo hadda loo heli karo wixii Android ah, waxaan sharraxaynaa sida ugu fudud ee lagu heli karo.
Memoji waa jawaabta Apple ee Samsung ee AR Emoji
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay soo bandhigtay muuqaal cusub oo loogu magac daray Memoji, oo si cad loogu waxyooday nidaamka emoticon ee la qaabeyn karo iyadoo wajigeenna ay dhiirrigelisay AR Emojis ee Galaxy S9.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee lagu ciyaaro biyaano
Afarta codsi ee ugu fiican Android si ay u ciyaaraan biyaano. Soo ogow afartan barnaamij ee aad ku baran karto ku ciyaarida biyaano qaab fudud taleefankaaga Android.
Sida loo saxo oo loogu daro bogagga Khariidadaha Google ee loogu talagalay Android
Sida loo daro oo wax looga beddelo khariidadaha Google ee ku yaal Android. Soo ogow tilaabooyinka la raacayo si aad awood ugu yeelatid inaad wax ka bedesho jidadka ama meelaha si fudud arjiga khariidadaha Google ee taleefankaaga.
Horumariyayaashu waxay awoodi doonaan inay xayiraan barnaamijyada taleefannada Android Go
Horumariyayaashu waxay xayirayaan barnaamijyada loogu talagalay Android Go. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan go'aankan doonaya in looga hortago dadka isticmaala taleefannada hoose inay soo degsadaan codsiyada aan si fiican ugu shaqeynayn taleefankooda.
Sida looga hortago xiriirada taleefankaaga Android inay lumaan
Sida loo badbaadiyo ama looga soo kabsado xiriirada Android. Soo ogow siyaabaha aan u adeegsan karno si aan uga lumin xiriirada aan ku leennahay taleefanka.
Codsiyada waxtar leh ee Android xagaagan
Shan codsiyo waxtar leh oo Android ah xagaagan. Soo ogow barnaamijyadan aad kuugu sahlanaan doonto inaad qorsheyso xagaaga oo aad ugu raaxeysato fasaxyadaada.
Codsiyada ugu wanaagsan ee lagu raaco Koobka Adduunka ee Kubadda Cagta 2018
Afarta codsi ee ugufiican ee lasocda Koobka Aduunka Soccer 2018. Soo ogow barnaamijyadan si aad marwalba ula socoto waxa ka dhacaya Russia koobka adduunka sanadkan.
Chrome 67 ee loogu talagalay Android wuxuu la yimaadaa xaqiiqo dhab ah oo la kordhiyay
Chrome 67 waxay u keentaa Android xaqiiqda la kordhiyay iyo tan dhabta ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta biraawsarka cusub, kaas oo naga tagaya astaamo iyo horumarinno kala duwan oo cusub.
Google Lens wuxuu ku fidayaa dhamaan taleefannada gacanta ee Android
Google Lens wuxuu bilaabaa inuu ku yimaado taleefannada ku habboon ee Android. Ogow wax badan oo ku saabsan ballaadhinta Lens-ka ee taleefannada cusub, oo waliba iman doona Spain.
LG G6 wuxuu cusbooneysiiyaa Android 8.0 Oreo gudaha Spain
LG G6 ee Spain wuxuu cusbooneysiiyaa Android 8.0 Oreo. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka cusboonaysiinta dhammaadka sanadkii hore, ka dib bilooyin aad ka sugaysay adeegsadayaasha.
Dhamaan taleefannada Nokia waxay cusbooneysiin doonaan Android P
Xaqiijiyay: Dhamaan taleefanada Nokia waxay cusbooneysiin doonaan Android P. Raadi wax badan oo ku saabsan warkan oo mar kale muujinaya in astaanta ay tahay tan sida ugu fiican wax uga qabata cusbooneysiinta.
Weather Live PRO hadda waa bilaash 7 maalmood oo keliya !!
Hadda waad soo dejisan kartaa arjiga Cimilada Live PRO, mid ka mid ah codsiyada saadaasha cimilada ee ugu wanaagsan, bilaash kaliya 7 maalmood, sidaas darteed waxaad kuu badbaadinaysaa in ka badan 4 Euro oo ah kharashkeedii caadiga ahaa.
Suuqa Ciyaaraha Google Play ayaa lagu waayey Spain
Google Play Newsstand ayaa ku baaba'aya Spain iyada oo aan ogeysiis hore la helin. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhammaadka adeegga kuu oggolaaday inaad iska diiwaangeliso joornaalada Spain, ogeysiis la'aan Google.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee lagu barto Faransiiska
Afarta barnaamij ee ugufiican ee lagu barto Faransiiska. Soo ogow barnaamijyadan aad si fudud ugu baran karto Faransiiska taleefankaaga Android.
Barnaamijyada ugu wanaagsan Android ee socodka
Afarta barnaamij ee ugu wanaagsan Android ee socodka. Soo ogow xulashadan barnaamijyada Android ee aad ugu baxeyso dabeecadda ayaa adiga kugu habboon.
Barnaamijyada ugufiican ee lagu barto Jarmalka Jarmalka
Afarta codsi ee ugufiican ee lagu barto Jarmalka Jarmalka. Soo ogow barnaamijyadan aad si fudud ugu baran karto luuqadda.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu sawiro Android
Afarta codsi ee ugu fiican ee lagu sawiro Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulashada barnaamijyadan si aad ugu sawirto taleefankaaga Android fudayd.
Vivo Y83: Noocyada soo gelitaanka cusub ee leh Android 8.1 Oreo
Vivo Y83: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub soo saaraha Shiinaha ee gaara heerarka gelitaanka.
Sida loo isticmaalo dib udajinta xoogga ee taleefannada casriga ah ee leh batteriga aan laga saari karin
Sida loogu qasbo telefoonada dib udaarida batteriga aan lagaran karin. Soo ogow sida looga faa'iideysto shaqadan taleefannadaas aan lahayn beytar dhaqameed laga saari karo.
Sida loo yeesho tilmaamaha shaashadda Android P ama iPhone X. (La cusbooneysiiyay, hadda waxay la shaqeysaa boosteejooyinka leh bar navigation)
Codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo aan ku yeelan doonno tilmaamaha shaashadda sida Android P ama Apple ee iPhone X laftiisa.
Shaqada xiriirada carrab la 'waxay timaaddaa Instagram
Instagram ayaa dhawaan noo oggolaan doonta inaan ka xirno xiriiryada qaabkeeda cusub. Baro wax badan oo ku saabsan muuqaalka xiriiriyeyaasha cusub ee carrab la'aanta ah si aad u joojiso daawashada qoraalladooda adigoon xannibin ama tirtirin qofkaas.
Android P ee shirkadaha: Kuwani waa wararka ugu muhiimsan
Dhamaan wararka ay Android P u keento shirkadaha. Soo ogow isbeddelada noocaan ah nidaamka qalliinka uu ugu tagayo macaamiisha ganacsiga, taas oo hubaal dad badan qancisa.
Microsoft Word for Android ayaa la rakibay 500 milyan oo jeer
Microsoft Word waxay ku soo dejisay 500 milyan oo jeer Android. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sida guusha leh ee barnaamijka Microsoft ugu dhacay taleefannada Android.
Sida loogu qasbo cusbooneysiinta taleefanka Android
Sida ugu fudud ee loogu cusbooneysiiyo cusbooneysiinta taleefankaaga Android. Soo ogow talaabooyinka aan raacno si aan ugu qasbo cusbooneysiinta taleefankaaga Android.
Beddelka ugu fiican ee Hawlaha Google
Afarta beddel ee ugu wanaagsan ee ku shaqeeya Android illaa Google Hawlaha. Soo ogow barnaamijyadan oo bedel wanaagsan u noqon kara barnaamijka Google.
Talooyin iyo tabaha si aad uga faa'iidaysato TV-ga Android
5 talooyin iyo tabaha si aad uga faa'iidaysato TV-ga Android. Soo ogow tilmaamahan iyo tabaha fudud ee kuu oggolaan doona inaad ku raaxeysato TV-gaaga inbadan oo TV-ga Android ah.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee lagula kulmo dadka
Saddexda codsi ee ugu fiican Android si aad ula kulanto dad cusub. Soo baro barnaamijyadan adeegsadayaasha doonaya inay awood u yeeshaan inay la kulmaan dad cusub.
Sidaad ugu abuuri lahayd furaha sirta ah aaladdaada Android
Talooyin iyo tabaha abuurista erey sir ah oo adag. Soo ogow siyaabaha ugu wanaagsan ee aad ugu dhisi karto furaha sirta adag taleefankaaga Android.
Maxaa meesha ka maqnaa! Facebook hadda wuxuu na weydiinayaa rukhsad rujin
Codsiga Facebook wuxuu weydiiyaa dadka isticmaala rukhsadda xididka. Raadi wax badan oo ku saabsan cayayaanka lagu ogaadey barnaamijka weydiisanaya dadka isticmaala inay siiyaan rukhsad rujin.
Waxaan horeyba u haysannay Dragon Ball Legends APK oo loo heli karo dhammaan isticmaaleyaasheena bulshada Androidsis, waxaan kuu sheegeynaa sida loo rakibo ciyaarta cusub ee xayeysiiskan caanka ah hadda.
Tababarka fiidiyowga ee aan ku tusayo sida loo rakibo muusigga muusiga ee Huawei P20 nooc kasta oo ka mid ah terminal-ka Android ee leh nooca 4.2 ama noocyada sare ee Android.
Android TV, ma u qalantaa?
Haddii aad ka fekereyso inaad dayactir ku sameyso telefishankaagii hore, mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee la heli karo ayaa ah telefishannada leh TV-ga Android. TV-ga Androidku ma u qalmaa? Waa maxay codsiyada jira si looga faa'iidaysto? Halkan ka ogow!
[APK] Soo Degso Shazam Lite
Cashir fiidiyow ah oo aan ku barayo sida loo rakibo Shazam Lite xitaa haddii xaddidaadyada juqraafiyeed awgood aysan ku jirin Play Store-ka waddankaaga.
Nokia waxay xaqiijineysaa in Nokia 5 iyo 6 ay leeyihiin Android P
Nokia 5 iyo 6 waxay lahaan doonaan cusbooneysiin ku saabsan Android P. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta u imaan doonta labada taleefan ee astaanta, taas oo ay horay u xaqiijisay shirkaddu.
Mirroring Android: Sida loo arko shaashaddaada Android ee PC, MAC, iOS ama terminal kale oo Android ah
Tababar fiidiyow ah oo ficil ah oo aan ku barayo muraayadaha Android, ama wixii la mid ah, ka eeg shaashadda Android kombiyuutarka ama nooc kasta oo qalab ah, ha ahaato Windows, MAC, iOS ama terminal kale oo Android ah.